प्रेम बानियाले हिजो निर्बाचनको दिन अमेरिका बाट मुख खोले !!!!! यो एउटै शब्दले सारा नेपालीलाई जोड्न सक्छ भिडियो सहित नेपाली ३ करोड जनताले हेर्ने पर्ने एक पटक !!! - Enepalese.com
प्रेम बानियाले हिजो निर्बाचनको दिन अमेरिका बाट मुख खोले !!!!! यो एउटै शब्दले सारा नेपालीलाई जोड्न सक्छ भिडियो सहित नेपाली ३ करोड जनताले हेर्ने पर्ने एक पटक !!!
इनेप्लिज २०७४ मंसिर २२ गते २२:२१ मा प्रकाशित
हरेक मतदाताको मत उसको स्वाभिमानको प्रतीक हो ।
जिन्दगीभरी भोट हाल्न नपाएको पुस्ताको प्रतिनिधी पात्र हूँ म । २०५४ सालमा उमेर नपुगेर र त्यसपछि संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा टेलिभिजनको (बाकस) स्टुडियोभित्र ! र, आज सरदर दुई दशकपछि मेरो देशमा परिवर्तनको बेगसँगै विशेष निर्वाचन भइरहँदा आफू देशबाहिर !!! मजस्ता अरु लाखौं युवाहरु छन् जसको मनमा मेरो जस्तै छट्पटी र उद्वेलन चलिरहेको होला तर देशबाहिर रहेका तमाम् ती सबै नेपालीले नेपाल र नेपाली स्वाभिमानको रक्षार्थ असल नेतृत्वले बिजय हासिल गरोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका छौं ।
हाम्रो प्रार्थना समग्र समृद्धिका पक्षमा हो, स्वाभिमानको पक्षमा हो । र,हरेक मतदाताको मत उसको स्वाभिमानको प्रतीक हो । ‘स्वाभिमान’ यो एउटै शब्दले देश परिवर्तन गर्नसक्छ यो एउटै शब्दले समृद्धि र सुख दिनसक्छ यो एउटै शब्दले समाप्त पारिदिन सक्छ परनिर्भरता यो एउटै शब्दले सारा नेपालीलाई जोड्न सक्छ यो एउटै शब्दले शीर उच्च बनाउन सक्छ नेपाल र नेपालीको तर, शब्दले आफै देश परिवर्तन गर्दैन !!! न त शब्द बोलेर वा लेखेर मात्रै यो सब सम्भव छ । तर, सम्भव छ यसमा हामी प्रकट हुनसक्यौं भने । हामी संसारभरबाट स्वाभिमानको यो विशेष अभियान पनि सुरु गर्दैछौं । र, आज आफ्नो स्वाभिमानको प्रतीक मत दिंदैगर्दा बिदेशिएका सारा नेपालीलाई पनि एकपटक सम्झिनुहोला अनि सही पात्रलाई, परिवर्तन र समृद्धिको सम्भावनालाई मत चढाउनु होला । जय स्वाभिमान ।